Maxaa keenay in haweeneydaan ay hal mar wada guursato toddobo nin?! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Maxaa keenay in haweeneydaan ay hal mar wada guursato toddobo nin?!
Maxaa keenay in haweeneydaan ay hal mar wada guursato toddobo nin?!
Haweeney hal mar wada guursatay toddobo nin
Uganda (Halqaran.com) – Haweeney hal mar wada guursatay toddobo nin ayaa soo bandhigtay muuqaallo cajaa’ib ah oo ku saabsan sida ay ula nooshahay toddobadeeda nin.
Muuqaaladeeda ayaa si aad ah loogu wadaagay baraha bulshada ay ku xiriirto, haweeneydaan oo ay garab taagan yihiin toddobada nin ayaa sheegtay in ay dhammaan baahidooda wada qancin karto waxayna ku dartay in ay mid kasta oo ka mid ah toddobada nin u dhistay guri ugaar ah.
Haweeneydaan ayaa sheegtay in midkoodna uusan awoodin in uu dumar kale hoosta kala socdo iyadoona sheeganeysa in ay awood u leedahay in ay markiiba ogaato ninka haween kale hoosta kala socda, muuqaalka ayaana muujinaya in dhammaan toddobada nin ay wada aamus naayen.
Wax yaabaha la yaabka leh ee ku saabsan sheekada haweeneydaan xagjiradda ah una dhalatay waddanka Uganda ayaa ah in aysan cagaheeda dhulka dhigin ayadoona loo qaado meel kasto oo ay aadeyso waxaana qaada toddobadeeda nin.
Iyadoo hadleysay ayaa sheegtay in sababta keentay in ay toddoba nin wada guursato ay tahay in ay dumarka wax dheertahay.